Marka nooca cusub ee Plex.Earth 3 la sii deynayo, waxaan ogaanay in kasta oo ay taageerto soo dejinta adeegyada khariidadaha mareegta, faa'iidada ugu weyn ee illaa iyo hadda ay ahayd in la soo dejiyo sawirka Google Earth ee saxda ah ... ma fududaan doonto. Tani waa sababta oo ah Google, oo raadineysa inay ka fogaato ...
Plex.Earth 3.0 ayaa ila soo gaadhay marka hore, kaas oo aan waqti u helay in aan tijaabiyo inta aan qeexayo taariikhda helitaanka ee nooca ugu dambeeya. Waxaa macquul ah bisha Nofeembar 2012. Waxay la socotaa AutoCAD 2013 Waxaa laga yaabaa in waxa ugu casrisan ay tahay in noocani si gaar ah loogu sameeyay AutoCAD 2013, ama mid ka mid ah ...
Illaa iyo hadda waxay ahayd wax caadi ah in lagu arko UTM iyo iskuduwaha juqraafi ee Khariidadaha Google. Laakiin sida caadiga ah haynta xogta ay Google taageerto oo ah WGS84. Laakiin: Maxaa dhacaya haddii aan rabno inaan ku aragno Khariidadaha Google, iskuduwaha Colombia ee MAGNA-SIRGAS, WGS72 ama PSAD69? Iskuduwaha Spain ee ETRF89, Madrid 1870 ama xitaa REGCAN 95? ...
Maqaalkan waxaan ku soo dhaweyneynaa wejiga cusub ee bogga rasmiga ah ee 'CivilCAD', shaqo weyn oo ka socota asxaabta ARQCOM habeenkii ugu horreeyay ee 15 jirsanaya iyadoo in ka badan 20,000 kun oo isticmaaleyaal ah Latin America Qeybteeda cusub ee "Casharrada" shaqooyinka xiisaha leh waxaa lagu soo daray caqli-tallaabo-tallaabo. ...